ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ
အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့နှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း။
Million Makers Hong Kong သည်ဖောက်သည်များအားဟောင်ကောင်နှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) အတွက်ကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ဘဏ်စာရင်း၊ ဟောင်ကောင်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဟောင်ကောင်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဟောင်ကောင် CRM ဖြေရှင်းမှု၊ , ဟောင်ကောင်နှင့် 109 နိုင်ငံများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပိုပြီး။
ဟောင်ကောင်သည်၎င်း၏ဖန်ခွက်များ၊ ကျောက်ခဲများနှင့်ဘုံဆိပ်ကမ်းများကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားသည်။ လူ ဦး ရေ ၇ သန်းခန့်ကျန်ရှိနေသည့်squareရိယာမှာစတုရန်းကီလိုမီတာ ၁,၁၀၄ ခန့်ရှိပြီးဟောင်ကောင်သည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။
အခြေခံဥပဒေသည်ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ၏တည်ထောင်ထားသောမော်ကွန်းတိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်“ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ မူဘောင်နှစ်ခု” ၏အရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်များကိုခိုင်လုံသောမှတ်တမ်းတစ်ခုတွင်တန်ဖိုးထားသည်။
ဟောင်ကောင်တွင်ပြည်ပရောက်ငွေကြေးမန်နေဂျာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောလူ ဦး ရေများပြားသော်လည်းလူ ဦး ရေ၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်၏တရုတ်ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အရည်အသွေးများကိုအနောက်နိုင်ငံများမှလွှမ်းမိုးထားခြင်းခံရသော်လည်းအနောက်တိုင်းသားများအနေဖြင့် Hofstede (Czinkota 98) မှ 'psyche ၏စုစုပေါင်းပရိုဂရမ်းမင်း' ဟုခေါ်သည့်ဤလူမှုရေးဂီတကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
မျက်မှောက်ခေတ်ဟောင်ကောင်တွင်အနောက်တိုင်းသားများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများကကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကိုအားနည်းစေခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အပြုအမူကိုပြသနေဆဲဖြစ်သည်။ များစွာသောဟောင်ကောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကြီးကြပ်သူသည်သူ၏လက်အောက်ငယ်သားများကိုအုပ်စိုးသူနှင့်ဖခင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တံခါးစောင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများအနေဖြင့်အကြီးအကဲနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းအောင်မြင်ရန်အတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိအလုပ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်မန်နေဂျာသည်အလုပ်သမားများ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အသက်နှင့်ရာထူးကိုဟောင်ကောင်တွင်အလွန်မှတ်ယူကြသည်။ လူငယ်များသည်သူတို့၏သက်ကြီးရွယ်အိုများအားလေးစားစွာဖြင့်ဟောပြောခြင်းနှင့်လမ်းပြခြင်းအပေါ်မှီခိုနေကြသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်အကြီးတန်းအရာရှိများသည်သူတို့၏ကလေးများအားကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်လုပ်ခလစာပေးရန်အားကိုးရသည်။ ဟောင်ကောင်တွင်အဖော်များအကြားခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထိရောက်မှုရှိစေရန်သူတို့ကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးအချင်းချင်းဆက်ဆံကြသည်။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကောင်းချီးများကိုအစဉ်အမြဲတုံ့ပြန်သင့်သည်။ ဟောင်ကောင်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်သူတို့၏အဖော်များနှင့်အတူတာ ၀ န်ယူနေသော်လည်း၊ အဘယ်သူမျှမညှိနှိုင်းသဘောထားပေးနေကြသည်မဟုတ်နှင့်အဘယ်သူမျှမအပြင်ကနေပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ ဟောင်ကောင်တွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေစဉ်ဟောင်ကောင်တစ် ဦး ချင်းတို့သည်“ လေးစားမှု” ခံရသည်ကိုသတိရသင့်သည်။
မျက်နှာရှိခြင်းသည်အပေါင်းအသင်းများတွင်အဆင့်အတန်းမြင့်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လေးစားမှုလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဘဝရှုထောင့်အားလုံးတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ လူတစ် ဦး ကိုစော်ကားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများရှေ့တွင်ရက်စက်စွာကဲ့ရဲ့ခြင်းမပြုရန်သင့်လျော်သည်။ ထိုနည်းတူစွာမျက်နှာကိုဆုံးရှုံးနိုင်သကဲ့သို့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်သူဌေးများ၏ရှေ့မှောက်၌ကောင်းသောအလုပ်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချီးကျူးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ မျက်နှာပေးခြင်းအားဖြင့်ဟောင်ကောင်တွင်လေးစားမှုနှင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်မှုကိုရရှိစေသည်။ သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်အားဂေါက်သီးကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲတွင်လွှမ်းမိုးရန်ခွင့်ပြုရန်သင်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ သင်သည်၎င်းတို့ထက်သာလွန်သည်ဖြစ်စေသူတို့၏မျက်နှာကိုမနှမြောစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုဟောင်ကောင်ရှိလူထု၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစံနှုန်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်မျက်နှာမပြသောသူသည်ကြင်နာမှုကိုလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်ဘဲသူသည်သင်၌တာဝန်ရှိသည်။ ဟောင်ကောင်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်အောင်မြင်မှုသည်သင်သိထားသည့်အရာအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်၊ တစ် ဦး ချင်းအသင်းအဖွဲ့များအတူတကွအလုပ်လုပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူသည်စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအိမ်နှင့်နီးကပ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည်၊ ၄ င်းတို့၏လေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိမည်။
စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဟောင်ကောင်တွင်အောင်မြင်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလားအလာရှိသောဟောင်ကောင်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးစံနမူနာမှာအလယ်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်စပီကာတစ်ခုအဖြစ်ဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြန်အလှန်ရှေ့, သင်တစ် ဦး ချင်းဆက်ဆံရေးမျိုးကိုထူထောင်ရန်ရှိသည်အဖြစ်ဒါဟာဟောင်ကောင်မှာလူနာစီမံခန့်ခွဲမှုများစွာယူ။ visits ည့်သည်များ၊ အစားအစာများ၊ ပေးကမ်းခြင်းများကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးရည်မွန်မှုအနည်းငယ်ဖြင့်တစ်ဆင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းများအတွက်စွမ်းအင်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဟောင်ကောင်ရှိအလုပ်ပုံစံနှင့်ရုံးခန်းအခြေအနေများဖြစ်သည်။
အချိန်ကိုက်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ငွေကုန်ကြေးကျခံနိုင်မှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးတွင်ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသည်ကြီးလေးပြီး၊ ငွေသားယူဆောင်ခြင်းသည်ဟောင်ကောင်ငွေကြေးမန်နေဂျာအများစုအတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းအပန်းဖြေမှုစိတ်ကူးသည်နှေးကွေးခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သည်။
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအားအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ဟောင်ကောင်ရှိသင်၏နေရာလွတ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိရုံးခန်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဟောင်ကောင်၏ virtual virtual နံပါတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်၊ ဟောင်ကောင်၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး၊ လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ Web development၊ ဟောင်ကောင်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိအပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်နာမည်အချို့ကိုဖော်ပြရန်အတွက်ဟောင်ကောင်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်ဝရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံတကာချဲ့ထွင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ , ဟောင်ကောင်ရှိ CRM Solutions၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုန်သည်အကောင့်နှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိငွေကြေးအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ဟောင်ကောင်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှုရှိမှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အီးကောမတ်စ် ဟောင်ကောင်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဟောင်ကောင်ရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်ဟောင်ကောင်အတွက်။
ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဟောင်ကောင်အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဟောင်ကောင်နဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE သည်ဟောင်ကောင်အတွက်အဖြေရှာပေးသူများဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဟောင်ကောင် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဟောင်ကောင် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဟောင်ကောင်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဟောင်ကောင်
Merchant Account Hong Kong / Payment Gateway ဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Hong Kong
ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Apostille of Hong Kong စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal ဟောင်ကောင်
●ဟောင်ကောင်၏အစုရှယ်ယာများ (ကုမ္ပဏီ၏ပထမနှစ်) မှကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး - ဒေါ်လာ ၄၀၀
●ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၅၆၁
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် (၃) ခုပေးပါ။ )
●ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဆုံးဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ။
ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်နီးစပ်ရာဟောင်ကောင်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်အကြံဥာဏ်များလည်းပေးသည်။ သင်ကဟောင်ကောင်သို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာဟောင်ကောင်မှကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဟောင်ကောင်၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ချင်လျှင်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဟောင်ကောင်ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိဖောက်သည်များနှင့်ဟောင်ကောင်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်အနေဖြင့်ဟောင်ကောင်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတဆင့်ဟောင်ကောင်မှာဖွဲ့စည်းကုမ္ပဏီများသည်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးသည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် ဟောင်ကောင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်သုံးစွဲသူများအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဟောင်ကောင် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်ကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုအရေးပါမှုကိုပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ဟောင်ကောင်ရှိဝန်ဆောင်မှုများ
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ - ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောလျှင်မှန်ကန်လိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု / ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင် -
ဟောင်ကောင်ရှိရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဟောင်ကောင်ရှိရှယ်ယာများကကုမ္ပဏီလီမိတက်များအတွက်အသင်းလီမိတက်၏စာချွန်လွှာ & ဆောင်းပါးများ / ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ။
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ရှယ်ယာလက်မှတ် / ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ၏လက်မှတ်စာအုပ်။
ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ် / ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများကကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး။ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ။
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် / ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်ရှိလိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုချက်ပေးသည့်ဟောင်ကောင်ရှိခွင့်ပြုချက်ကိုပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers မှဟောင်ကောင်ရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်လောင်းကစား၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားဟောင်ကောင်ရှိငွေရေးကြေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
သင်ဟောင်ကောင်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဟောင်ကောင်နှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများဟောင်ကောင်တွင်သာမကဟောင်ကောင်ရှိ International CFA နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့နှင့်အတူဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဟောင်ကောင်ရှိ Corporate Services | ဟောင်ကောင်ရှိ Corporate Services
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက် ဟောင်ကောင်တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်၊ အွန်လိုင်းမှလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဟောင်ကောင်.
Accounts Outsourcing ဟောင်ကောင်
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်ဟောင်ကောင်တွင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးသင်အပြင်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဟောင်ကောင်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဟောင်ကောင်တွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဟောင်ကောင်တွင်သင်၏စုဆောင်းမှုကိုဝန်ထုတ်လိုက်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဟောင်ကောင်ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်ဟောင်ကောင်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"ဟောင်ကောင်၌တည်၏
ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဟောင်ကောင်.
ဟောင်ကောင်ရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဟောင်ကောင်ကနေ။
CRM Solutions၊ ဟောင်ကောင်
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏ဟောင်ကောင်ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ဟောင်ကောင်အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် နှင့်ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်ဟောင်ကောင်ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဟောင်ကောင်မှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဟောင်ကောင်ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်ရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Hong Kong ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Software Development Hong Kong | စျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဟောင်ကောင်တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဟောင်ကောင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအလျင်အမြန်လိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေသူများ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာကိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းကိုရိုးသားစွာဖြင့်ဟောင်ကောင်တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများပူးပေါင်းပါဝင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုထောက်ပံ့မှု | ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟောင်ကောင်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဟောင်ကောင်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဟောင်ကောင်တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားဟောင်ကောင်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကူညီသည်။ LLC သည်ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဟောင်ကောင်ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းမှာဟောင်ကောင်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်တည်ထောင်ခြင်း LLC၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ဟောင်ကောင်၊ ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဟောင်ကောင်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်သူများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုထောက်ခံသည်။ ဟောင်ကောင်၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟောင်ကောင် | LLC ကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို Hong Kong တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သောဟောင်ကောင်မြို့များမှာ - ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဟောင်ကောင်တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဟောင်ကောင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ကြီးများဖြစ်သောဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
သင်ဟောင်ကောင်ရှိတတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ HK တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်ရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊
ဟောင်ကောင်ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဟောင်ကောင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးကုမ္ပဏီပါဝင်မှုန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မြို့တော်တွင်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သူများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဖြင့်ဘဏ်စာရင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဟောင်ကောင် | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု HK
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်စရိတ်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုန်ကျ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးကိုဟောင်ကောင် | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး HK
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားဟောင်ကောင်တွင်ထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု HK
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟောင်ကောင် | LLC ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟောင်ကောင်ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟောင်ကောင်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဟောင်ကောင်ရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်း?
ဟောင်ကောင်ရှိအစုရှယ်ယာများဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုထည့်သွင်းပါ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဟောင်ကောင်တွင်တည်ထောင်ပါ Inc ဟောင်ကောင်၊ IBC ကိုဟောင်ကောင်တွင်ထည့်သွင်းပါ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီလီမိတက် IBC ကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်ထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်တွင်ထည့်သွင်းပါ
သုံးစွဲသူအများစုမှမေးသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုတို့အကြားခြားနားချက်မရှိပါက၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဟောင်ကောင်ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်ရှိအဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းအင်းများပြားလှသောပမာဏနှင့်မြင့်မားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုပေးသည်။ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားဟောင်ကောင်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအားဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဟောင်ကောင်သည်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်သည်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
ABN AMRO ဘဏ် www.abnamro.com.hk
Baden-Wurttembergische ဘဏ်၊ BW ဘဏ် www.bw-bank.com
Banca Intesa SP တစ် ဦးwww.bancaintesa.it
အမေရိက၏ဘဏ် (အာရှ) လီမိတက်www.bankofamerica.com/hk
Montreal ဘဏ် www.bmo.com.hk
Nova Scotia ဘဏ် www.scotiabank.com
တိုကျို - မစ်ဆူဘီရှီဘဏ် www.bankofny.com
ဘဏ် SinoPac www.banksinopac.com.tw
BNP Paribas ပုဂ္ဂလိကဘဏ် bnparibas.com.hk
Cathay ယူနိုက်တက်ဘဏ်ကုမ္ပဏီ www.cathaybk.com.tw
Chang Hwa ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် www.cibcwm.com
Chiba ဘဏ် ir.chibabank.co.jp/english/
Citibank ဟောင်ကောင် www.citibank.com.hk
Chinatrust ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် www.chinatrust.com.tw
Chiyu ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း www.chiyubank.com
Chugoku ဘဏ် www.chugin.co.jp
Lyonnais ကိုဂုဏ်ပြု www.creditlyonnais.com
CITIC ကဝါးဘဏ် www.citickawahbank.com
Coutts ဘဏ် (Schweiz) AG www.coutts.com
DBS ဟောင်ကောင် enquiry.hk@dbs.com
Deutsche Bank တို့ AG က www.deutsche-bank.com
ပထမ ဦး ဆုံးစီးပွားဖြစ်ဘဏ် www.firstbank.com.tw
EFG ပုဂ္ဂလိကဘဏ် -efgbank.com
သာတူညီမျှ PCI ဘဏ် www.equitablepcib.com
Spste ဘဏ်သည်အခြားဘဏ်များ၊ www.erstebank.at
ဘဏ် NV ing www.ing.com
Fubon ဘဏ် (ယခင်ကအာရှဘဏ်ဟုလူသိများသည်) www.fubonbank.com.hk
Hachijuni ဘဏ် www.82bank.co.jp
ဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ဟိုင်းဘဏ်ကော်ပိုရေးရှင်း (HSBC) www.hsbc.com.hk
စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် China (Asia) Limited, ICBC Asiawww.icbcasia.com
ICS ယုံကြည်မှု www.icstrust.com
Liu Chong Hing ဘဏ်လီမိတက် www.lchbank.com
Iyo ဘဏ် www.iyobank.co.jp
JPMorgan Chase ဘဏ် www.iyobank.co.jp
မလေးဘဏ်လုပ်ငန်း Berhad (Maybank) www.maybank2u.com.my
Mevas ဘဏ်လီမိတက် www.mevas.com
Nanyang ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် www.ncb.com.hk
Pacific Finance (ဟောင်ကောင်) လီမိတက် www.pfhkl.com.hk
Shiga ဘဏ် www.shigagin.com
Sumitomo Mitsui ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း www.smbc.co.jp
Shizuoka ဘဏ် www.shizuokabank.co.jp
Societe General မှ www.sg-ib.com
Standard Chartered ဘဏ် www.standardchartered.com.hk
Tai Sang ဘဏ်လီမိတက် www.taisangbank.com.hk
တိုရွန်တို - Dominion ဘဏ် www.tdbank.ca
UBS AG က www.ubs.com
UCO ဘဏ် www.ucobank.com
United Overseas Bank Group (ဟောင်ကောင်) www.uobgroup.com/hk/home.html
Woori ဘဏ် www.wooribank.com
Wells Fargo ဘဏ် www.wellsfargo.com
Westpac ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း www.westpac.com.au
Wing Hang ဘဏ် www.whbhk.com
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဟောင်ကောင်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဟောင်ကောင် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဟောင်ကောင်မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေလက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်မှသို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမထောက်ပံ့ပါ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်မှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိသို့မဟုတ်မှဟောင်ကောင်သို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဟောင်ကောင်မှသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်မှကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်မှသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
●အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်အတွင်းမှသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်မှလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သို့ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအခြေခံသည့်ဟောင်ကောင်နှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ကုမ္ပဏီများအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရ။
●ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဟောင်ကောင်မှသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်သို့မသွားဘူး။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဟောင်ကောင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင် ဘဏ်အကောင့်, ဟောင်ကောင် ယုံကြည်မှု ဟောင်ကောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဟောင်ကောင်။ "
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-hong-kong/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-hong-kong/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-hong-kong/